I-lactic acidosis: incazelo nezimbangela ze-lactic acidosis > Izinkinga zesifo sikashukela
Iyini incazelo ye-lactic acidosis nezimbangela ze-lactic acidosis
I-Lactic acidosis yinto engavamile kakhulu, futhi iyingozi kakhulu ebangelwa izimo ezithile ze-pathological (izifo noma ama-syndromes).
i-athikili / i-768159
Imbangela eyinhloko ekwakhiweni kwalesi simo esiyingozi (ukufa kwayo kusuka ku-50 kuya ku-90% wawo wonke amacala) ukuqoqeka ngokweqile kwe-lactic acid ku-plasma yegazi nezicubu zomgogodla zesistimu yezinzwa. Ukweqiwa kwayo ngokweqile kubangela ukuncipha okuphikelelayo kwe-acidity yegazi elengezwani.
I-lactate yakhiwa emzimbeni ngesikhathi sokubola kwe-glucose - umthombo oyinhloko wama-carbohydrate, izinto ezidingekayo ekusebenzeni okuvamile kohlelo lwezinzwa nemisebenzi yobuchopho. Le nqubo ibizwa ngokuthi yi-anaerobic metabolism.
Singasho ukuthi i-lactic acidosis yisimo somzimba womuntu lapho inqubo yokungena egazini le-lactic acid kwenzeka ngokushesha okukhulu kunokukhishwa kwayo.
Izimbangela ze-lactic acidosis
ukuphazamiseka kwesisekelo se-metabolic (methylmalonic acidemia, uhlobo 1 glycogenosis),
ukuphathwa (kokudlula ipheshana lesisu) kwemithamo emikhulu ye-fructose,
ukusetshenziswa kwe-ethylene glycol noma i-methanol,
pheochromocytoma (isimila se-adrenal gland),
izifo ezithathelwanayo eziyinkimbinkimbi
ukulimala okukhulu kwesibindi nezinso,
ukudla ngokweqile kwama-salicylates,
ubuthi be-carbon monoxide,
Izizathu ezilandelayo zingaba yizici ezitusekayo ezithinta ukweqisa emzimbeni we-lactic acid ku-mellitus yesifo sikashukela:
i-misuli hypoxia (indlala yomoya-mpilo) ngokuzikhandla komzimba,
ukwehluleka okujwayelekile kokuphefumula (ukungasebenzi kahle),
ukuntuleka kwamavithamini (ikakhulukazi iqembu B),
infarction ezinzima myocardial,
ubudala kusukela eminyakeni engama-65,
I-provocateur eyinhloko yokwakhiwa kwe-lactic acidosis yindlala ye-oxygen (hypoxia). Ezimweni zokuntuleka okukhulu komoya-mpilo, ukuqongelela okusebenzayo kwe-lactic acid kwenzeka (kuthuthukisa ukunqwabelana kwe-lactate ne-anaerobic glycolysis).
Ngokuhlukaniswa kwe-carbohydrate engenawo umoya-mpilo, umsebenzi we-enzyme obhekene nokuguqulwa kwe-pyruvic acid ube yi-acetyl coenzyme A uyancipha. Kulesi simo, i-pyruvic acid iphenduka i-lactate (lactic acid), okuholela kwi-lactic acidosis.
Isigaba sokuqala. I-Lactic acidosis esigabeni sokuqala iziveza ngokungacaciswanga. Izimpawu ezilandelayo ziyabonakala:
Ukuphela kwesibonakaliso ekuqaleni kwengcindezi engaholela ekutheni umuntu acabange ngokuthuthuka kwe-lactic acidosis yi-myalgia (ubuhlungu bemisipha), ikakhulukazi ngemuva kokuzivocavoca okukhulu komzimba.
Isigaba esiphakathi. Njengoba inani le-lactic acid linqwabelana, ukuthuthukiswa kwe-hyperventilation syndrome (DHW) kuqala. Nge-DHW, kukhona ukwephulwa kokushintshwa kwegesi kwamaphaphu, okuholela ekunqwabeni kwe-carbon dioxide egazini. Ukuphefumula kukaKussmaul kuqala ukwakheka, kubonakaliswa imijikelezo engavamile, enesigqi, ngokuphefumula okujulile kanye nokuphefumula kanzima. Ukuphefumula okunjalo kuhambisana nomsindo.
Esigabeni esiphakathi sokukhula kwe-lactic acidosis, kuvela izimpawu zokuqina kokuqina kwenhliziyo (i-arterial hypotension), okuthi, ukwanda, kungaholela ekuweni (ukwehla okubukhali kwengcindezi yegazi). Ngokuphikisana nalesi sizinda, ukuthuthukiswa kwe-oliguria.Ukukhathazeka ngezimoto kuyaqala, i-delirium, efakwa esikhundleni se-stupor (ukungaboni kahle) okulandelwa yi-coma.
Isigaba sekwephuzile. I-Lactocytadic coma. Kwi-lactic acidosis, ukomisa akuyona uphawu, ngoba izimpawu zesifo ziqhubeka ngokushesha okukhulu, kusukela esigabeni sokuqala kuye kwesokugcina, amahora ambalwa kuphela angadlula.
Kunzima kakhulu ukuthola i-lactic acidosis. Isifo salesi sifo sikhonjiswa ngezifundo ze-elekhtale ze-labochemical zamapharamitha egazi. Ukuhlaziya kuveza okuqukethwe okunyuke kwe-lactate, futhi lapho ufunda idatha yesimo se-acid-base, kutholakala ukwanda kokuphumula kwe-anionic kweplasma. Imininingwane elandelayo ikhombisa ubukhona be-lactic acidosis:
ukugcwala kwe-lactate ku-serum yegazi kufinyelela inani le-2 mmol / l (ngesilinganiso se-0.4-1.4),
Izinga lokuhlushwa le-bicarbonate linezinkomba ezingaphansi kuka-10 mmol / l (okujwayelekile cishe kungama-20),
inani lezinto eziqukethe i-nitrojeni zokunyuka kwamaprotheni (i-hyperazotemia),
izinkomba zesilinganiso se-lactic ne-pyruvic acid 10: 1,
amazinga akhulayo ngendlela engajwayelekile we-lipid (hyperlipidemia),
i-pH yegazi yehla ngezansi 7.3.
Ukuze welaphe i-lactic acidosis, izindlela zokuqala zokwelapha zenzelwe ukulwa nokuphazamiseka kwe-electrolyte, acidosis, shock kanye ne-hypoxia. Ukwelashwa kokulungiswa kokuphazamiseka kwe-carbohydrate kanye nokwelashwa kwezifo ezifanayo, kungaba ngama-catalysts wokubonakala kwe-lactic acidosis, ayenziwa.
Indlela ephumelela kunazo zonke yokwenza u-asidi we-lactic ngokweqile kwezicubu ze-peripheral yi-hemodialysis.
Ukuqeda ukweqiwa kwe-carbon monoxide, okuvela ngenxa yokwephulwa kwebhalansi ye-pH, isiguli sibhekana ne-hyperventilation yokwenziwa kwamaphaphu. Ngoba lesi siguli sitshelwa.
Ukwelapha i-lactic acidosis futhi kwehlise izinga le-lactate emzimbeni, kuyadingeka ukwandisa ukuqina kwe-pyruvate dehydrogenase ne-glycogen synthetase. Lokhu, ukufakwa kweglucose (5-12,5 g / h) kuphathwa ngaphakathi ngasikhathi sinye kufakwe i-insulin (ihanjiswa njalo ngehora amayunithi angama-2-4-6).
Ukuqalwa kabusha kwe-alkaline intracellular esele kwenzeka ngokuncipha kwe-carbon dioxide ku-plasma kuya ku-25-30 mm RT. Ubuciko. Lokhu kusiza amazinga aphansi we-lactic acid.
Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa ze-Cardio- ne-vasotonic zinqunywe, ngokubekelwa kwabo imingcele ye-hemodynamic. Kwi-pH engaphansi kuka-7.0, i-bicarbonate yesodium i-2,5,5% iphathwe ngaphakathi (umuthi uphathwa kancane, usebenzisa i-dropper emthamo we-100 ml). Ngasikhathi sinye, ukulawula inani le-potassium kanye ne-pH esegazini kuhlolwa njalo.
Kuyini i-lactic acidosis - izimbangela kanye nezimpawu zesifo, ukuxilongwa, izindlela zokwelashwa nokuvimbela
Ukubandakanyeka okukhulu lapho i-lactate ingena ngokushesha egazini yi-acid acid. I-lactic acidosis yohlobo 2 sikashukela i-mellitus ingenzeka ngemuva kokusetshenziswa kwemithi enciphisa ushukela. Lokhu kusabela okucishe kufane namalungiselelo ezinhlobonhlobo ze-Biguanide (Metformin, Bagomet, Siofor, Glyukofazh, Avandamet). Isimo sihlukaniswe izinhlobo ezimbili:
Uhlobo B lactic acidosis aluhlangene ne-hypoxia yezicubu zomzimba. Kwenzeka ngesikhathi sokwelashwa ngezidakamizwa ezithile ezilwa nesifo sikashukela nokutheleleka nge-HIV.I-Milk acidosis yalolu hlobo ivame ukuzibonakalisa iphikisana nesizinda sotshwala noma izifo zesibindi ezingalapheki.
Indlala ye-oksijini (hypoxia) yemisipha ngemuva kokuxineka ngokomzimba. Lesi simo somzimba singesesikhashana futhi sidlula sodwa ngemuva kokuphumula.
I-Lactic acidosis - isimo se-pathological esivela ngokukhula okuqhubekayo kwezinga le-lactic acid egazini liye ku-5 mmol / l noma ngaphezulu. Kubonakaliswa ngezimpawu zokudakwa - isicanucanu, ukuhlanza, isiyezi, ukukhathazeka. Emazingeni akamuva, ukwehluleka kokuphefumula nge-hyperventilation enzima yamaphaphu, ukudideka ngesimo se-stupor ne-coma kuyisici. Izindlela eziphambili zokuxilonga ukuhlolwa kweLabhoratri kwegazi nomchamo. Ukwelashwa kufaka i-hemodialysis, umoya omncane wokushayela, ukufakwa kwezixazululo kashukela, ukulungiswa kwezidakamizwa kwezifo ezihlangene.
I-lactic acidosis ngesiLatini isho "i-lactic acid". Lesi simo sibizwa nangokuthi i-lactacidemia, i-lactic coma, i-hyperlactatacidemia, i-lactic acidosis. Ku-ICD-10, i-pathology inikezwa iqembu lokuphazamiseka kwebhalansi yamanzi-usawoti ne-acid-base (isigaba - izifo ze-Endocrine system). Lokhu kuyinkinga engavamile kakhulu. Idatha ngqo yokuqashelwa kwezifo ayikaze ibonwe, kepha kuye kwatholakala ukuthi cishe isigamu samacala atholakala ezigulini ezitholakala nesifo sikashukela i-mellitus.Kuleli qembu leziguli, ngokuya ngezifundo zakwamanye amazwe, imvamisa ye-lactic acidosis ingu-0.006-0.008%. Ukuthuthukiswa kwezinkinga akuxhomekeki ebulini; kubhaliswa kakhulu kubantu abaneminyaka yobudala engama-35 kuye kwengama-84.
I-lactic acidosis ingabangelwa ukukhiqizwa okwandayo kwe-lactate, ukungasebenzi kwayo okwanele ngokusebenzisa ama-rebu tubules kanye / noma ukuphazamiseka kwe-metabolic esibindini, lapho ukuthinteka kwe-pyruvate kanye nokwakhiwa kwe-glucose kusuka kumakhompiyutha angenayo i-carbohydrate. Izimbangela zalokhu kugudluzwa komzimba yile:
I-pathological ye-Hereditary of metabolism. Kukhona uhlobo olunqunywe ngofuzo lwe-acidosis. Ngalo, ukwephulwa kubonwa ezingeni lama-enzyme asemqoka we-carbohydrate metabolism, izimpawu zibonakala ngokushesha ngemuva kokuzalwa.
Isifo sikashukela mellitus. Imvamisa ukunqwabelana kwe-lactate kubangelwa ukusetshenziswa kwama-biguanides - izidakamizwa ze-hypoglycemic. Ubungozi bokwephulwa kukhuphuka ngokushoda kwesibindi nokusebenza kwezinso, ukulamba kwe-oksijeni kwezicubu zomzimba ngemuva kokuzivocavoca, ama-syndromes okuphefumula, ukuntuleka kwamavithamini, ukusetshenziswa kotshwala nokukhulelwa.
Isifo senhliziyo. I-Lactacidemia yakheka kuma-patic inhliziyo, asindwa yizinkinga zokujikeleza, ngemuva kokusebenza kwenhliziyo kusetshenziswa i-AIK, ene-sepsis, i-hypovolemic kanye ne-cardiogenic shock ne-DIC. Izimpawu ze-acidosis ziyanda ngokushesha.
Izimo zokuvuselela. I-Lactic acidosis ingakhula nomdlavuza (ikakhulukazi nge-pheochromocytoma), ezigulini ezikhubazekile noma ezethukile. Le nkinga iphinde icasulwe izilonda ezijulile nezinwebile zezinso nezinso.
I-Intoxication. Ingozi ye-lactic acidosis inyuka ngotshwala. Obani ukumunwa kwe-carbon monoxide, i-ethylene glycol, i-methanol, usawoti we-salicylic ne-hydrocyanic acid, ama-chlorides potentiates.
I-Lactic acidosis ibonakala ngokwanda okuqhubekayo kwe-lactic acid, i-arterial blood acidization. I-Lactic acid ingumthombo wamandla, kepha, ngokungafani noshukela, i-metabolism yayo yenzeka anaerobically (ngaphandle kokufaka i-oxygen lapho isabela). Ikhiqizwa ngamangqamuzana abomvu egazi, izicubu zamathambo, izicubu zesikhumba nohlelo oluphambili lwezinzwa, izinso, ulwelwesi lwama-mucous esiswini, i-retina, ne-tumor neoplasms. Ukwenziwa okwandisiwe kwe-lactate kuvame ukubangelwa yi-hypoxia, lapho ukuguqulelwa kwe-glucose ku-adenosine triphosphate kungabi khona.
Ngaphezu kwalokho, i-lactic acidosis ibangelwa ukusetshenziswa okunganele kwe-asidi yizinso nezinso. Indlela eyisihluthulelo ye-pathological ukwephulwa kwe-gluconeogenesis, lapho i-lactate evame ukuguqulwa iguqukele glucose noma i-oxidized ngokuphelele ekuxhumeni kokuvela kokuvela kwe-citric acid. Indlela eyengeziwe yokulahla - i-excretion ngokusebenzisa izinso - isebenza lapho inani lokubhula le-lactic acid lilingana no-7 mmol / l. Nge-hereditary lactic acidosis, iziphene zokuzalwa kokuhlanganiswa kwama-enzymes adingekayo ekubhujisweni kwe-pyruvic acid noma ukuguqulwa kwamakhemikhali angenayo i-carbohydrate ku-glucose kuyaphawulwa.
Ngokuya kobunzima besithombe somtholampilo, ubulukhuni benkambo buhlukanisa izigaba ezintathu ze-lactic acidosis: ekuqaleni, phakathi nendawo sekwephuzile. Ukuthuthuka kwabo kwenzeka ngokushesha okukhulu, kungakapheli amahora ambalwa lezi zimpawu ziqina kusuka kubuthakathaka obujwayelekile kuya ekhefeni. Okunye ukwahlukaniswa kususelwa kunqubo ye-etiopathogenetic engaphansi kokucindezela. Ngokusho kwayo, izinhlobo ezimbili ze-hyperlactatacidemia ziyahlukaniswa:
Kutholiwe (uhloboA). Imvamisa debuts ngemuva kweminyaka engama-35. Kubangelwa ukwephulwa kokuhlinzekwa kwe-oksijini negazi kwezicubu. Izimpawu zesimo somtholampilo se-metabolic acidosis ziyabonakala - Imisebenzi ye-CNS ayvinjelwe, izinga lokuphefumula kanye nenhliziyo ishintsha. Ubudlelwano obuqondile phakathi kwezinga le-lactacidemia nezimpawu ze-neurological buqashwe.Ngesifo sikashukela, kunamathuba aphezulu okuthuthukisa ukushaqeka, ukwehla okukhulu komfutho wegazi.
I-Congenital (uhloboB). Kubonakala kusukela ekuzalweni, okuvame kakhulu kusukela ebuntwaneni, kubhekiswa ezinhlotsheni zofuzo zokuphazamiseka kwe-metabolic. Kusukela ezinsukwini zokuqala zokuphila, ukuphazamiseka kwemizwa nokuphefumula kunqunywa: i-myotic hypotonus, areflexia, stupefaction, dyspnea, polypnoea, izimpawu zesifo somoya.
Ukuthuthukiswa kwe-acute kuvame ukuba nzima kwe-lactatacidemia, isithombe esiphelele somtholampilo siveza emahoreni ayi-6-18. Izimpawu zabandulelayo zivame ukungabikho. Esigabeni sokuqala, i-acidosis iziveza ngokungacaciswanga: iziguli ziqaphela ubuthakathaka obujwayelekile, ukunganaki, imisipha kanye nobuhlungu besifuba, ukuphazamiseka kokugaya ukudla ngendlela yokuhlanza, izithupha ezikhululekile nobuhlungu besisu. Isigaba esiphakathi sihambisana nokukhuphuka kwenani le-lactate, ngokumelene nesizinda sayo lapho kunemicimbi yokuhanjiswa kwamaphaphu khona. Umsebenzi wamaphaphu wokushintshanisa kwamaphaphu ukhubazekile, i-carbon dioxide iqoqana ohlelweni lokujikeleza kwegazi. Izinguquko emsebenzini wokuphefumula zibizwa ngokuthi ukuphefumula kukaKussmaul. Ukushintshaniswa kwemijikelezo engathandeki yesigqi enomoya omnandi nokuphefumula okukhulu kuyabonakala.
Izimpawu zenhliziyo elukhuni nokuqina kwemithambo kuyatholakala. Ezigulini, umfutho wegazi wehla kakhulu, i-hypotension iyanda njalo, ingaholela ekuweni. Ukukhiqizwa kwe-urine kunciphisa, i-oliguria iyakhula, bese kuba ne-anuria. Kwembulwa izibonakaliso ezahlukahlukene ze-neurological - ama-areflexia, ama-spastic paresis, ama-hyperkinesis. Khulisa ukukhathazeka kwezimoto, i-delirium. Ekupheleni kwesigaba esiphakathi, i-DIC iyenzeka. I-Thrombosis enezilonda ze-hemorrhagic necrotic atisa ukutholakala. Esigabeni sokugcina, ukuyaluza kwe-psychomotor kuthathelwa indawo yi-stupor ne-coma. Umsebenzi wezinzwa, zenhliziyo, wokuphefumula kanye nowokuchama uyavinjelwa.
Nge-Type B lactic acidosis, izimpawu zivame ukwenzeka ezinsukwini zokuqala zempilo yengane. Ukuphazamiseka okuphefumulayo kuya phambili: i-dyspnea - ukufushane komoya, umuzwa wokuntuleka komoya, i-polypnoea - ukuphefumula okusheshayo komhlaba, izimo ezinjenge-asthma - ukukhwehlela okukhanyayo, amakhwela, ubunzima bokuphefumula ngaphakathi nangaphandle. Phakathi kwezimpawu ze-neurological, hypotension yemisipha, i-areflexia, imithambo eyingqayizivele, iziqephu zokuqwashisa okuyizimfihlo zinqunywa. Kunqatshwa ibele kanye nengxube yokufakelwa, ukugabha kaningi, ubuhlungu besisu, ukuqubuka kwesikhumba, ukubekezelela kwelesi sibalo. Ngokuzayo, kuvame ukubambezeleka ukukhula komqondo nangokomzimba.
I-Lactic acidosis iyingozi enkulu ngenxa yengozi ephezulu ye-edema yamakhemikhali nokufa. Amathuba okufa ayanda ngokungabikho kokunakekelwa kwezokwelapha emahoreni ezayo ngemuva kwezimpawu zokuqala. I-Vascular hypotension kanye ne-hypoxia yobuchopho kuholela ekwakhiweni kwezifo ezihlukene zokuzala, ukuntuleka kwemizwa. Ngemuva kwesikhathi esibuhlungu, iziguli zikhononda isikhathi eside sesiyezi, ikhanda elingelapheki. Kungahle kube nokukhubazeka kwenkulumo nememori, edinga izindlela zokuvuselela.
Ukuhlolwa kweziguli kwenziwa ngesimo esiphuthumayo. Udokotela we-endocrinologist ubandakanyeka ekuxilongeni, futhi ukubonisana nodokotela oyi-neurologist kunqunyelwe ngokwengeziwe. I-Lactic acidosis inzima kakhulu ukuyithola ngokomtholampilo - izimpawu ziyahlukahluka, kuzo zonke izigaba kubuhlungu bemisipha kuphela. Lesi sithombe sisonke sifana nezinhlobo ezithile ze-encephalopathy, nge-hypoglycemia, ngesikhathi sokuthuthukiswa lapho inani le-lactate lihlala lilijwayelekile. Ukuxilongwa kuqinisekiswa ngesisekelo sokucwaninga okwenziwe elebhu. Kufaka:
Ukuhlolwa kwegazi kwe-biochemical. Kwenziwa ukuze kukhonjwe izinguquko ze-metabolic ekuqoqweni kwe-lactic acid noshukela.Izinga le-lactate lingaphezu kwama-3 mmol / l, inani elikhulayo le-glucose ne-nitrogen equkethe i-peptide metabolism, ukwanda okungajwayelekile kokuhlushwa kwe-lipids, isilinganiso se-lactic ne-nepruvic acid ngu-1: 10.
Ucwaningo lwe-uroc biistry yomchamo. Ngokusho kwedatha yokugcina, kulondolozwa umsebenzi wezinso kanye nezinga le-lactate excretion kutholakala. Imiphumela ye-Urinalysis ikhombisa izinga eliphezulu le-acetone, ushukela.
Igazi pH. Uvivinyo lukuvumela ukuthi ukhombe isimo se-oxygenation ne-pH-esele yomzimba. Nge-lactatacidemia, izinga lokuxakaniseka kwe-bicarbonate lingaphansi kwe-10 mmol / l, inani le-pH lisuka ku-7.3 kuye ku-6.5.
Ukwelashwa kwesimo sokuzala kwe-lacticacidemia kwenziwa ngezigaba. Okokuqala, ukuguquguquka kwe-acidotic ekulinganiseni kwe-pH kuqedwa, ngemuva kwalokho kubekwe ukudla okukhethekile: ukuphazamiseka kwe-gluconeogeneis kulungiswa ngokudla njalo kwengane ngokudla okune-carbohydrate, ukuphazamiseka kumjikelezo we-oxruation we-pyruvate kudinga ukukhuphuka kwenani lamafutha ekudleni, okuqukethwe kwabo kufanele kufinyelele ku-70% wokuqukethwe kwekhalori yansuku zonke. Ukwelashwa kwezindlela ezitholiwe ze-lactic acidosis kuhloswe ngayo ukubuyisa ibhalansi ye-electrolyte, ukulwa ne-acidosis, i-hyperglycemia, ukushaqisa kanye nendlala yomoya-mpilo. Izinqubo ezilandelayo zenziwa:
Hemodialysis, ukumnika. Ukuhlanzwa kwegazi ngaphandle komzimba kuyindlela ephumelela kakhulu yokuqeda i-lactate ngokweqile ohlelweni lokujikeleza kwegazi. Isixazululo se-glucose sibuye siphathwe ngaphakathi. Ngokufana, imijovo ye-insulin iyenziwa. Ukudalwa okunjalo kuvusa umsebenzi we-pyruvate dehydrogenase ne-glycogen synthetase enzymes.
Umoya omncane wokuphefumula. Ukususwa kwe-carbon monoxide eyakhiwe ngenxa yokwephulwa kwebhalansi ye-pH kwenziwa ngendlela yemishini yokufaka umoya omncane. Ukuqalwa kabusha kwe-alkaline ibhalansi kwenzeka lapho ukugcwala kwekhabhoni dioksiydi ku-plasma kwehla kuye ku-25-30 mm RT. Ubuciko. Le ndlela yehlisela phansi i-lactate.
Ukuthatha izidakamizwa zenhliziyo. Imithi yaleli qembu ivusa umsebenzi wesibeletho womsipha wenhliziyo, ibuyise isigqi. Ama-glycosides e-Cardiac, ama-adrenergic agents, ama-Cardiotonics ama-non-glycoside.
Umphumela we-lactic acidosis uthande ukwelashwa okuphumelelayo kwesifo esingezansi, ukuhambisana nesikhathi nokwanela kokwelashwa kokungena. I-prognosis futhi incike ohlotsheni lwe-lactacidemia - ukusinda kuphezulu phakathi kwabantu abanhlobo lwe-A pathology (etholwayo). Ukuvimbela kuncishiselwa ekuvinjelweni kwe-hypoxia, ukudakwa, ukwelashwa okulungile kwesifo sikashukela ngokunamathela ngokuqinile kumthamo ngamunye we-Biguanides nokukhanselwa kwawo ngokushesha uma kwenzeka kungenwa izifo ezithinta ngaphakathi (i-pneumonia, umkhuhlane). Iziguli ezivela emaqenjini anobungozi obukhulu - ngokuxilongwa kwesifo sikashukela kuhlangene nokukhulelwa, ukuguga - kufanele siqaphe ngokucophelela isimo sabo, ngezibonakaliso zokuqala zobuhlungu bemisipha nobuthakathaka, funa izeluleko zezokwelashwa.
I-Lactic acidosis yohlobo 2 lwesifo sikashukela: izimpawu nokwelashwa kwe-lactic coma
Kuyini i-lactic acidosis futhi yini izimpawu zale nkinga ku-mellitus yesifo sikashukela - imibuzo evame ukuzwakala kakhulu ezigulini ze-endocrinologist. Imvamisa lo mbuzo ubuzwa yiziguli ezihlushwa uhlobo lwesibili sikashukela.
I-Lactic acidosis kusifo sikashukela iyinkimbinkimbi yesifo. Ukuthuthukiswa kwe-lactic acidosis kushukela kungenxa yokuqongelela kwe-lactic acid kumaseli wezitho nezicubu ngaphansi kwethonya lokuqina komzimba emzimbeni noma ngaphansi kwesenzo sezinto ezifanele kumuntu okuvusa ukukhula kwezinkinga.
Ukutholwa kwe-lactic acidosis kushukela kuyenziwa ngokubona kwe-lactic acid egazini lomuntu. I-Lactic acidosis inesici esiyinhloko - ukuqoqwa kwe-lactic acid esegazini kungaphezu kwe-4 mmol / l futhi ububanzi be-ion buyi-10.
Kumuntu ophile kahle, i-lactic acid ikhiqizwa ngamanani amancane nsuku zonke ngenxa yezinqubo ze-metabolic emzimbeni. Le khompiyutha icutshungulwa ngokushesha ngumzimba kuyi-lactate, okuthi, ngokungena esibindini, iqhubeke nokuqhutshwa ngokuqhubekayo. Ngezigaba eziningana zokucutshungulwa, i-lactate iguqulwa ibe yi-carbon dioxide namanzi noma ibe ushukela ngokuvuselelwa kanyekanye kwe-anic ye-bicarbonate.
Uma umzimba uqongelela i-lactic acid, i-lactate iyayeka ukukhishwa bese kusetshenzwa yisibindi. Lesi simo siholela eqinisweni lokuthi umuntu uqala ukukhulisa i-lactic acidosis.
Kumuntu ophilile, inani le-lactic acid esegazini akufanele lidlule inkomba ye-1.5-2 mmol / l.
Imvamisa, i-lactic acidosis iba nohlobo 2 lwesifo sikashukela ezigulini, ezihlaselwe yisizinda sesifo esiyisisekelo, ngemuva kokuthola lesi sifo.
Izizathu ezinkulu ezibangela ukuthuthukiswa kwe-lactic acidosis emzimbeni yilezi ezilandelayo:
ukulamba kwe-oksijini kwezicubu zomzimba,
ukopha okuholela ekulahlekelweni kwegazi okukhulu,
ukulimala kwesibindi okukhulu
ukuba khona kokwehluleka kwezinso, ukuthuthukisa ngenkathi kuthathwa i-metformin, uma kunophawu lokuqala kusuka kuhlu olubekiwe,
ukuzikhandla okukhulu ngokomzimba emzimbeni,
ukuvela kwesimo sokushaqeka noma i-sepsis,
ukuba khona komzimba wesifo sikashukela esingalawulwa futhi uma kuthathwa umuthi onesifo sikashukela,
ukuba khona kwezinkinga ezithile zikashukela emzimbeni.
Ukuvela kwe-pathology kungatholakala kubantu abaphilile ngenxa yomthelela emzimbeni womuntu wezimo ezithile nasezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus.
Imvamisa, ubisi lwe-acidosis luba kushukela lapho kuphambana nenkambo yesifo sikashukela esingalawulwa.
Kumuntu onesifo sikashukela, lesi simo somzimba asifaneleki kakhulu futhi siyingozi, ngoba kulesi simo kungaqalwa ikoma lactacidic.
I-lactic acid coma ingaholela ekufeni.
Ku-diabetes lactic acidosis, izimpawu nezimpawu zingaba ngale ndlela elandelayo:
umuzwa wokucanuzelelwa kwenhliziyo
ukubonakala kokuhlanza nokuzihlanza,
ukuphefumula kaningi nokujulile
ukubonakala kobuhlungu esiswini,
ukubonakala kobuthakathaka obukhulu emzimbeni wonke,
ukuthuthukiswa kwe-lactic coma ejulile.
Uma umuntu enohlobo lwesibili lwe-mellitus yesifo sikashukela, khona-ke ukugeleza ku-lactic acid coma kubonwa esikhathini esithile emva kokuvela kwezimpawu zokuqala zokuxakaniseka.
Lapho isiguli siwohloka,:
ukwehla kwenani lama-bicarbonate ku-plasma yegazi kanye nokwehla kwe-pH yegazi,
kutholakala inani elincanyana lama-ketones emchameni,
Izinga le-lactic acid emzimbeni wesiguli linyukela ezingeni le-6.0 mmol / l.
Ukuthuthuka kwezinkinga kuqhubeke kakhulu futhi isimo somuntu ohlushwa isifo sikashukela sohlobo 2 sikhula kancane kancane amahora amaningi alandelanayo.
Izimpawu ezihambisana nokwakhiwa kwale nkinga ziyafana nezimpawu zezinye izinkinga, futhi isiguli esinesifo sikashukela singawela ekhefini ngesilinganiso esiphansi nesikhuphukayo sikashukela emzimbeni.
Konke ukuxilongwa kwe-lactic acidosis kususelwa ekuhlolweni kwegazi elebhu.
Ukwelashwa nokuvimbela i-lactic acidosis lapho kukhona isifo sikashukela
Ngenxa yokuthi le nkinga ngokuyinhloko ibangelwa ukuntuleka komoya-mpilo emzimbeni, izindlela zokwelapha zokususa umuntu kulesi simo ngokuyinhloko zisekelwe ohlelweni lokugcwala kwamangqamuzana omzimba womuntu nezitho ezine-oxygen. Ngale njongo, kusetshenziswa imishini yokufaka umoya wamaphaphu yokufakelwa.
Lapho ususa umuntu esimweni se-lactic acidosis, umsebenzi oyinhloko kadokotela ukususa i-hypoxia evele emzimbeni, ngoba yikho ngqo lokhu okuyimbangela eyinhloko yokwenziwa kwe-lactic acidosis.
Ehlelweni lokusebenzisa izindlela zokwelapha, ingcindezi nazo zonke izimpawu ezibalulekile zomzimba zigadwe. Ukulawulwa okukhethekile kwenziwa lapho abantu asebekhulile besuswa esimweni se-lactic acidosis, abahlushwa umfutho wegazi ophakeme futhi babe nezinkinga nokuphazamiseka kwesibindi.
Ngaphambi kokuthola i-lactic acidosis esigulini, igazi kumele lithathwe ukuze lihlaziywe. Ngenqubo yokwenza ucwaningo lwelabhoratri, i-pH yegazi nokuxineka kwama-ion e-potassium kuyo kunqunywa.
Zonke izinqubo zenziwa ngokushesha okukhulu, ngoba ukubulawa kwabantu kusukela ekukhuleni kwengxaki enjalo emzimbeni wesiguli kuphezulu kakhulu, futhi isikhathi soguquko kusuka kokujwayelekile kuya kokunye lufushane.
Uma kutholakala amacala abucayi, i-potassium bicarbonate iyalawulwa, lo muthi kufanele uphathwe kuphela uma i-acidity engaphansi kwe-7. Ukuphathwa kwomuthi ngaphandle kwemiphumela yokuhlaziywa okufanelekile kwenqatshelwe ngokuphelele.
I-acid acidity ihlolwa esigulini njalo emahoreni amabili. Ukwethulwa kwe-potassium bicarbonate kufanele kwenziwe kuze kufike isikhathi lapho i-medium izoba ne-acidity engaphezu kwe-7.0.
Uma isiguli sinokuhluleka kwezinso, i-hemodialysis yezinso siyenziwa. Ngokwengeziwe, i-peritoneal dialysis ingenziwa ukubuyisela izinga elijwayelekile le-potassium bicarbonate emzimbeni.
Ehlelweni lokususa umzimba wesiguli ku-acidosis, kusetshenziswa i-insulin yokwelashwa okwanele kanye nokuphathwa kwe-insulin, inhloso yayo ukulungisa umzimba we-carbohydrate metabolism.
Ngaphandle kokuhlolwa kwegazi okune-biochemical, akunakwenzeka ukuthola ukuxilongwa okuthembekile kwesiguli. Ukuvimbela ukukhula kwesimo se-pathological, isiguli siyadingeka ukuletha izifundo ezidingekayo esikhungweni sezokwelapha lapho kuvela izimpawu zokuqala ze-pathology.
Ukuze uvimbele ukukhula kwe-lactic acidosis emzimbeni, isimo se-carbohydrate metabolism emzimbeni wesiguli esinesifo sikashukela kufanele silawulwe ngokucacile. Ividiyo ekulesi sihloko ikhuluma ngezimpawu zokuqala zesifo sikashukela.
Ukuphazamiseka kwephimbo lomsipha
I-Lactic acidosis, noma, njengoba ibizwa nangokuthi, i-lactic acidosis, okuvusa ukhukhula kwe-hyperlactacidemic, kuyinkinga enkulu kakhulu, futhi efanelekile ngesifo sikashukela futhi kubangelwa ukuqokelelwa kwe-lactic acid emzimbeni (isicubu samathambo, ubuchopho nesikhumba) inani ngokuthuthukiswa okwalandela kwe-metabolic acidosis. I-Lactic acidosis, izimpawu zazo okufanele zaziwa kakhulu ezigulini ezinesifo sikashukela, zibangelwa yizici eziningi, esizocubungula ngezansi.
Lezi zimo ezilandelayo zivusa ukukhula kwe-lactic acidosis:
Izifo ezithathelanayo nezifo
Uhlobo olukhulu lokopha,
I-Alcoholism esigabeni sayo esingamahlalakhona,
I-infralction infalction ye-myocardial,
Ukulimala kakhulu emzimbeni
Isifo sesibindi (esingamahlalakhona).
Esibalweni esiphelele sezinto ezibangela i-lactic acidosis nezimpawu zohlobo oluhambisanayo, indawo ekhethekile inikezwe ukuthatha ama-biguanides. Kulokhu, izimpawu ze-lactic acidosis zenzeka ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus, zithatha izidakamizwa zohlobo lwe-antipyretic ngokuba khona kwale nto ekwakhiweni. Noma umthamo wayo omncane wezinso ezithintekile noma isibindi ungavusa i-lactic acidosis, esiza ikakhulu ukuqokelelwa kwale mithi emzimbeni.
Ukuthuthukiswa kwe-lactic acidosis kwenzeka nge-hypoxia eyenzeka emithanjeni yamathambo, okuthi, ngokwesibonelo, ingahle ihlotshaniswe nengcindezi yomzimba yesikhathi eside. Imbangela ye-lactic acidosis ngaphandle kokuba khona okusobala kwe-hypoxia kungaba yi-leukemia, kanye nezinye izinhlobo zezinqubo zesimila.Lokhu kufaka futhi ukwehluleka kokuphefumula, ukushaya kwenhliziyo okulimazayo kwamaphaphu, amathumbu, kanye nokushoda emzimbeni we-thiamine.
Ikakhulu ukuthuthukiswa kwe-lactic acidosis kwenzeka ngesimo esibuhlungu kungakapheli amahora ambalwa, ngenkathi kungabikho okubhekelayo. Ngemuva kwalokho iziguli zingahlangabezana nobuhlungu bemisipha nobuhlungu obenzeka ngemuva kwe-sternum. Izimpawu zobuntu izinhlobo ezahlukahlukene zezimpawu dyspeptic, ukungakhathaleli, ukuphefumula ngokushesha, ukuqwasha, noma, ngakolunye uhlangothi, ukozela.
Izimpawu ezikhona, njengamanje, zibonisa ngesimo sokwehluleka kwenhliziyo, okuthi kamuva kubhebhethekiswe yi-acidosis enzima. Ngokuphikisana nalesi sizinda, izinguquko ezilandelwa kamuva, zibonakaliswa ekuvumelaneni, isimilo se-myocardium.
Ngaphezu kwalokho, ukuwohloka okuqhubekayo ngokuguquguquka kwesimo esejwayelekile sesiguli kuyaphawulwa, lapho ukuhlanza nobuhlungu besisu kungahlanganiswa nokwenyuka kwe-acidosis. Lapho isimo siba sibi kakhulu nge-lactic acidosis, izimpawu zibuye zihlukaniswe yizimpawu ezahlukahlukene zemizwa, ezisukela ku-areflexia kuya ku-paresis ne-hyperkinesis.
Ngokushesha ngaphambi kokuqala kokukhula komqondo, okuhambisana nokuphelelwa yithemba, kunokuphefumula okungenamsindo, okubonakala ngokuzwakala kokuphefumula okuzwakala kude, kuyilapho iphunga lomlingiswa we-acetone walesi simo likhona emoyeni ophelile. Lolu hlobo lokuphefumula luvame ukuhambisana ne-metabolic acidosis.
Ngemuva kwalokho i-lactic acidosis ibonakala ngezimpawu ngendlela yokuwa: okokuqala nge-oligoanuria, bese kuba ne-anuria, ngokumelene nesizinda lapho ukuthuthukiswa kwe-intravascular coagulation (noma i-DIC) kwenzeka khona. Imvamisa, izimpawu ze-lactic acidosis zibonakala ngokuvela kwe-intravascular thrombosis nge-hemorrhagic necrosis ethinta izinzwani nezandla. Kumele kuqashelwe ukuthi ukuthuthukiswa okusheshayo kwe-lactic acidosis, okwenzeka emahoreni ambalwa, akunagalelo ekubonakalweni kwezimpawu zokuphazamiseka kwesifo sikashukela. Lezi zimpawu ikakhulukazi zifaka ukoma kolwelwesi lwe-mucous lolimi nolwelwesi, kanye nesikhumba esomile sonke. Kuyaphawuleka ukuthi kuleli cala, aze afike ku-30% weziguli ezine-hyperosmolar kanye nesifo sikashukela ezinezici ezihambelana nokutholakala kwe-lactate acidosis.
Ukuxilongwa kwe-lactic acidosis enezimpawu ezishiwo ngenhla kunzima ukukuthola, yize kuthathwa njengezindlela zesimo esisizayo. Izinqubo zaselebhu zinokwethenjelwa, ezisuselwa ekunqumeni kuleli cala lokwenyuka kokuqukethwe kwe-lactic acid egazini, kanye nokwehla kwalo kwe-bicarbonates kanye ne-alkalinity, i-hyperglycemia elinganiselayo futhi lapho kungekho i-acetonuria.
Lapho ucabanga nge-lactic acidosis kanye nezimpawu zayo, ukwelashwa kunqunywa ngokuyinhloko ukuqeda ngokushesha i-hypoxia, kanye ne-acidosis ngqo. Ukunakekelwa okuphuthumayo kwe-lactic acidosis nezimpawu kufaka ukuphathwa kwe-intravenous kwesisombululo se-sodium bicarbonate (2,5 noma 4%) ngevolumu efinyelela ku-2 l / ngosuku nge-Drip. Kulokhu, ukulawulwa kufanele kugcinwe izinkomba zezinga le-pH, kanye nezinkomba zezinga egazini le-potassium. Futhi, ukwelashwa kwe-lactic acidosis nezimpawu kuyaphoqelelwa ngokulashwa kwe-insulin yohlobo lwesenzo esinamandla sokwenza izakhi zofuzo, noma ukwelashwa okune-monocomponent nge-insulin enesimo esifushane sokwenza kwayo. Njengengxenye eyengeziwe ye-lactic acidosis nezimpawu ekwelashweni, ama-carboxylases afakwa emzimbeni asetshenziswa indlela yokudonsela phansi ngokungenisa cishe ama-200 mg / ngosuku. Kubalulekile ukuphatha i-plasma yegazi engene, imithamo emincane ye-heparin, enomthelela kulungiswa kwe-hemostasis, kanye nokwazisa kwe-reopoliglukin.
Ukuvimbela, okusiza ukuvimbela ukuqala kwe-lactacidemic coma ngokumelene nesizinda se-lactic acidosis, izimpawu esizihlole ngenhla, ziqukethe, ngokulandelana, ekuvimbeleni i-hypoxia, kanye nasengqondweni yokulawula ukunxeshezelwa kwesifo sikashukela. Futhi, i-lactic acidosis, izimpawu zayo ezingenzeka ngokusetshenziswa kwe-biguanides, idinga ukuqina ekunqumeni komuntu ngamunye komthamo wabo ngokukhanselwa okusheshayo uma kwenzeka izifo zohlobo lwangaphakathi (umkhuhlane noma i-pneumonia, njll). Izimpawu ze-lactic acidosis nazo ziyasebenza endabeni yezinqubo zokusekelwa, ngakho-ke, iziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus lapho zithatha i-biguanides kufanele futhi zibhekele lesi sici.
Noma yikuphi ukusola okuphathelene ne-lactic acidosis, kanye nama-nuance ama-activant axoxwa ngawo esihlokweni, kufanele uthinte ngokushesha i-endocrinologist.
Umhlahlandlela ku-Endocrinology, Medicine - M., 2011. - 506 c.
Briscoe Paul Isifo Sikashukela. Imibuzo nezimpendulo (ukuhumusha kusuka esiNgisini). IMoscow, iKron-Press Publishing House, 1997, amakhasi angama-201, ukusatshalaliswa kwamakhophi ayi-10,000.
Kamensky A. A., Maslova M. V., Bala A. V. AmaHormones abusa umhlaba. I-endocrinology edumile, Incwadi ye-AST-Press - M., 2013. - 192 c.
I-Etiology (izimbangela) ze-lactic acidosis
ukwehla kwezicubu oxygenation - izicubu hypoxia. Ukubaluleka okukhulu kunamathiselwe ekuphazamisekeni kokujikeleza (i-cardiogenic, septic, hypovolemic shock). Amathuba we-lactic acidosis ku-hypoxemia ye-arterial, ikakhulukazi isikhathi esifushane futhi angajulile, ayangabazeki. Futhi abukho ubufakazi obuqondile bokuthi liyanda yini izinga le-lactic acid egazini elinomfutho wegazi uma kungekho zimpawu zomtholampilo zokushaqeka. Kodwa-ke, ukuba khona kwazo zonke izinhlobo ze-hypoxemia theoretically kunomthelela ekuthuthukisweni kwe-lactic acidosis. Lokhu kuphakanyisiwe kuzo zonke izimo zenkinga yesifo esibuhlungu kakhulu, ezigulini ezine-hemodynamics engazinzile, ukwesekwa kwe-inotropic, isifo sokucindezela, njll. Kudingeka ukunquma izinkomba ze-CBS ngendlela ye-Astrup indlela, umehluko we-anionic kanye neleveli yegazi lactate,
ukungasebenzi kwesibindi kuholela ekunciphiseni kwamandla ayo okuguqula i-lactic acid ibe ushukela kanye ne-glycogen. Isibindi esisebenza ngokujwayelekile sisebenza ngamanani amaningi e-lactate, futhi ngethukile leli khono liyalimala,
Ukushoda kwe-thiamine (uvithamini B 1 ) kungaholela ekwakhiweni kwe-lactic acidosis lapho kungekho ukwehluleka kwenhliziyo. Ukushoda kwe-Thiamine kuphawulwa ezimweni ezibucayi, kaningi ezigulini ezisebenzisa kabi utshwala, ne-Wernicke izimpawu eziyinkimbinkimbi. Ukuntuleka kwe-thiamine kunomthelela ekwandeni kwezinga le-lactic acid ngenxa yokuvinjwa kwe-oxidation ye-pyruvate e-mitochondria. Izinga le-lactate ku-serum yegazi likhuphuka ngesikhathi sokuphuza ngokweqile, futhi ngemuva kwezinsuku ezingama-1-3, i-lactate acidosis idlulela ku-ketoacidosis,
ukukhuphuka kwezinga le-isxter dextrorotatory ye-lactic acid - i-D-lactic acidosis. Le isomer yakhiwa ngenxa yesenzo sezinto ezincane eziqeda ushukela emathunjini. I-D-lactate acidosis ivame kakhulu ezigulini ngemuva kokuhlinzwa kwesisu: ukuhlelwa okuningana kwamathumbu amancane, ukusetshenziswa kwama-anastomoses asemathunjini, njll, kanye nakuma-fat feta. Amasu ejwayelekile elaborabhori avumela i-isover ye-levorotatory ye-lactic acid kuphela ukuba inqunywe. Ukuba khona kwe-D-lactate acidosis kufanele kuthathwe ezigulini ezingenayo i-metabolic acidosis engajwayelekile futhi umehluko omkhulu we-anionic.Ukuphazamiseka kwephakethe lesisu, isisu, ukuhlinzwa esiswini, mhlawumbe i-dysbiosis, kungakhombisa lokhu kwephulwa. Ngokusobala, lesi sifo sivame kakhulu, kepha ngokuvamile asitholakali. Marino P., 1998,
ezinye izimbangela ezingenzeka ze-lactic acidosis kumayunithi wokunakekelwa kakhulu yi-lactic acidosis ehambisana nokwelashwa kwezidakamizwa. I-lactic acidosis ingadala ukumiliselwa isikhathi eside kwekhambi le-adrenaline. I-Adrenaline isheshisa ukuqhekeka kwe-glycogen emithanjeni yamathambo futhi yandise ukukhiqizwa kwe-lactate. Ukwanda kwe-lactic acidosis kusungulwa yi-vasoconstriction ye-peripheral, okuholela ku-anaerobic metabolism.
I-lactic acidosis ingakhula nge-sodium nitroprusside. I-metabolism yokugcina kuhlobene nokwakhiwa kwama-cyanides, okungaphazamisa izinqubo ze-phosphorylation oxid futhi kubangele i-lactic acidosis.
Ukwenziwa kwe-cyanide kungenzeka ngaphandle kokunyuka kwamazinga e-lactate. Ukukhangela kokukhuphuka kwezinga le-lactic acid nge-hyperventilation yesikhathi eside yokwenziwa kanye nokufakwa kwezixazululo ze-alkaline (kwaqalwa i-lactate acidosis) akunqunyelwe.
Phakathi kwezizathu zokuthi ngumbuso, ukudla isikhathi eside kwama-biguanides kuhlala endaweni ekhethekile. Ngisho nomthamo omncane wale mishanguzo (ngokuya ngobukhona be-renal noma i-hepatic dysfunction) ungavusa ukubonakala kwe-lactic acidosis.
Lapho welapha isiguli nge-Biguanides, ukuthuthukiswa kwe-lactic acidosis kwenzeka ngenxa yokungena kokuphazamiseka kwe-pyruvic acid (pyruvate) ngokusebenzisa ulwelwesi lwama-cellular mitochondria. Kulokhu, i-pyruvate ngenkuthalo iqala ukuguqula i-lactate.
Isigaba esiphakathi. Njengoba inani le-lactic acid linqwabelana, ukuthuthukiswa kwe-hyperventilation syndrome (DHW) kuqala. Nge-DHW, kukhona ukwephulwa kokushintshwa kwegesi kwamaphaphu, okuholela ekunqwabeni kwe-carbon dioxide egazini.
Esigabeni esiphakathi sokukhula kwe-lactic acidosis, kuvela izimpawu zokuqina kokuqina kwenhliziyo (i-arterial hypotension), okuthi, ukwanda, kungaholela ekuweni (ukwehla okubukhali kwengcindezi yegazi).
I-Lactic acidosis ikhula ngokushesha ngokwanele, kepha izimpawu zayo zokuqala zingaba ukuphazamiseka kwengqondo, ubuhlungu bemisipha, i-angina pectoris. Isici esihlukile ukungabi bikho komphumela wokuthatha ama-analgesics.
Ngokuvamile kusolwa ukuthi lokhu kuyi-lactic acidosis, izimpawu ezinjalo ezigulini ezinesifo sikashukela zivumela ukukhathazeka, ubuthakathaka, i-adynamia, ikhanda, isicanucanu, ukugabha, i-hypotension kuze kube ukuwa, isisu esibuhlungu, ukozela, okuba isiphukuphuku, ukoma nokuqaqamba, i-anuria ngokumelene ukwephulwa kokugcotshwa kwezinso.
Isikhumba siphaphathekile, sinama-cyanotic, ukushaya kwenhliziyo kuvama, kuncane. Ukwehluleka kwenhliziyo, i-arterial hypotension, ukuphefumula, ukuphefumula okuhlanganayo, ukuphefumula kweKussmaul kuyaqhubeka.
Njengoba kunikezwe ukuthuthukiswa kwayo okusheshayo, okungeyona eye yezimo ze-hyperglycemic, kubalulekile ukuhlukanisa ngokushesha i-lactic acidosis kusuka ekulahlekelweni kwe-hypoglycemic.
Ithebula - Izimpawu zokuxilonga ezihlukile zezimo ze-hyper- kanye ne-hypoglycemic
Qala Swift (imizuzu) Kancane (amahora - izinsuku)
Izinsimbi, ulwelwesi lwama-mucous Imanzi, ibunjiwe Umile
Ithoni yemisipha Kuphakanyisiwe noma kujwayelekile Yehlisiwe
Belly Azikho izimpawu zokugula Kuvuvukala, kubuhlungu
Umfutho wegazi Izinza Yehlisiwe
I-Lactic acidosis ivela ngenxa:
Izifo ezithathelanayo nezifo,
Ukulimala kakhulu emzimbeni,
Isici esibalulekile esibangela i-lactic acidosis ukuthatha i-biguanides, ngokwesibonelo, iMetformin ivame ukuthathwa. Kulokhu, kubonakale izimpawu ze-lactic acidosis ezigulini ezinesifo sikashukela, zithatha imishanguzo yeqembu elinciphisa ushukela ngaleli zinto ekwakhiweni kwalo.
Uma izinso noma isibindi zithintekile, noma umthamo omncane we-Biguanides ungadala i-lactic acidosis. Lesi simo sidalwa ukuqunjelwa kwezidakamizwa emzimbeni.
I-Lactic acidosis yenzeka nge-skeletal misuli hypoxia. I-Hypoxia ingenzeka, ngokwesibonelo, ngokuzikhandla komzimba okuhlala isikhathi eside. Kuzodinga nokwelashwa.
Uma kungekho khona okusobala kwe-hypoxia, khona-ke imbangela yalesi simo ingaba yi-leukemia nezinye izinqubo ezimbalwa zesisu. Ezinye izizathu zingafaka:
Ukuhlasela kwenhliziyo okukhulu kwamaphaphu,
Ukushoda kwe-Thiamine emzimbeni.
I-Lactic acidosis, imvamisa, ifaka ifomu elibi, cishe emahoreni ambalwa. Ngokuvamile, izimpawu zingase zingabikho ngokuphelele, kepha ukwelashwa kuyadingeka.
Iziguli ziqaphela ubuhlungu bemisipha nemizwa engathandeki evelayo ngemuva kwe-sternum. I-Lactic acidosis inezimpawu ezilandelayo:
Ukuboniswa kokwehluleka kwenhliziyo kuyizimpawu zakudala ze-acidosis enzima. Ukwephulwa okunjalo kuthuntubeza i-contractility, isimilo se-myocardium, ngenkathi i-lactic acidosis ikhula.
Ngemuva kwalokhu, i-lactic acidosis icaphukisa ukuwohloka okuqhubekayo esimweni esivamile, okuthi, ngenxa yokwanda kwe-acidosis, isisu siqale ukulimala, ukugabha kuyabonakala.
Uma isimo sesiguli i-lactic acidosis sanda kakhulu, khona-ke izimpawu zingahluka kakhulu: kusuka ku-areflexia kuya ku-paresis ne-hyperkinesis.
Ngokushesha ngaphambi kokuqala kokhokho, okuhambisana nokuphelelwa ukwazi, isiguli siqala ukuphefumula esinomsindo ngemisindo engasho lutho yokuphefumula. Ukuhogela kwesimilo kwe-acetone akubangeli i-lactic acidosis. Ngokuvamile, lolu hlobo lokuphefumula lwenzeka nge-metabolic acidosis.
ukwelashwa nge-Biguanides (izidakamizwa ze-hypoglycemic),
ukwephulwa kokujikeleza kwegazi nokuhlinzekwa komoya komoya ngezicubu nezitho zomzimba,
ukukhulelwa ezigulini ezinesifo sikashukela
umkhuhlane, izifo ezithathelwanayo,
ukwehluleka kwezinqubo ze-metabolic,
izinso ezingasebenzi kahle, isibindi,
I-infralction infalction eyenzeka kabi,
Izimpawu zenhliziyo elukhuni nokuqina kwemithambo kuyatholakala. Ezigulini, umfutho wegazi wehla kakhulu, i-hypotension iyanda njalo, ingaholela ekuweni. Ukukhiqizwa kwe-urine kunciphisa, i-oliguria iyakhula, bese kuba ne-anuria. Kwembulwa izibonakaliso ezahlukahlukene ze-neurological - ama-areflexia, ama-spastic paresis, ama-hyperkinesis. Khulisa ukukhathazeka kwezimoto, i-delirium. Ekupheleni kwesigaba esiphakathi, i-DIC iyenzeka.I-Thrombosis enezilonda ze-hemorrhagic necrotic atisa ukutholakala. Esigabeni sokugcina, ukuyaluza kwe-psychomotor kuthathelwa indawo yi-stupor ne-coma. Umsebenzi wezinzwa, zenhliziyo, wokuphefumula kanye nowokuchama uyavinjelwa.
Umoya omncane wokuphefumula. Ukususwa kwe-carbon monoxide eyakhiwe ngenxa yokwephulwa kwebhalansi ye-pH kwenziwa umoya omncane owenziwa ngomshini. Ukuqalwa kabusha kwe-alkaline ibhalansi kwenzeka lapho ukugcwala kwekhabhoni dioksiydi ku-plasma kwehla kuye ku-25-30 mm RT. Ubuciko. Le ndlela yehlisela phansi i-lactate.
ukwehla kwe-bicarbonates yegazi,
degree ye-hyperglycemia elinganiselayo,
I-Lactic acidosis: izimpawu zokuqala zesifo
Ngezimpawu zesimo kanye ne-lactic acidosis uqobo, ukunakekelwa okuphuthumayo kubandakanya ukuphathwa kwe-intravenous kwesisombululo se-sodium bicarbonate (4% noma 2,5%) kuze kufinyelele kumalitha ama-2 ngosuku.
I-Metformin isetshenziselwa isifo sikashukela, yehlisa i-hyperglycemia, kepha ayithuthukisi i-hypoglycemia. Ngokungafani nokususelwa kwe-sulfonylurea, okubandakanya izidakamizwa ze-sulfonamide, iMetformin ayikukhiqizi ukukhiqizwa kwe-insulin.
Uma kwenzeka kweqisa ngokweqile ngeMetformin kushukela, i-lactic acidosis ingaqhamuka nokusongela komphumela obulalayo. Isizathu ukugcotshwa komuthi ngenxa yokulimala kwe-renal function.
Uma kuvela izimpawu ze-lactic acidosis, kungcono ukuthi uyeke ukusebenzisa iMetformin. Isiguli kudingeka siphuthunyiswe esibhedlela. I-Metformin iqeda kahle i-hemodialysis ezimeni zezokwelapha. Ngaphezu kwalokho, ukwelashwa okubonakalayo kwenziwa.
I-Hypoglycemia ingakhula uma iMetformin ithathwa nge-sulfonylureas.
Kubalulekile ukuqaphela amanani we-pH kanye namazinga e-potassium egazini.
Ngaphezu kwalokho, nge-lactic acidosis nezimpawu, ukwelashwa kwe-insulin kwesimo esisebenzayo sokwenza izakhi zofuzo noma i-monocomponent therapy ene-insulin "emfushane" isetshenziswa njengendlela yokwelapha.
Ekwelashweni kwezimpawu kanye ne-lactic acidosis, ama-carboxylases nawo angahanjiswa ngaphakathi ngendlela ye-drip ngokwethulwa kwama-200 mg ngosuku.
Ngaphansi kwethonya lama-biochemical catalysts, i-molecule ye-glucose iyabola futhi yakhe ama-molecule amabili e-pyruvic acid (pyruvate).
Ngomoya-mpilo owanele, i-pyruvate iba yinto yokuqala yezinqubo ezibaluleke kakhulu ze-metabolic esitokisini. Uma kwenzeka indlala i-oxygen iphenduka i-lactate.
Imvamisa, isilinganiso se-pyruvate ne-lactate singu-10: 1, ngaphansi kwethonya lezinto zangaphandle, ibhalansi ingashintsha. Kunesimo esisongela impilo - lactic acidosis.
I-hypoxia yezicubu (ukushaqeka ubuthi, ubuthi be-carbon dioxide, i-anemia enamandla, isithuthwane),
indlala ye-oksijini engekho-izicubu (ubuthi nge-methanol, i-cyanides, i-biguanides, ukwehluleka kwe-renal / kwesibindi, i-oncology, izifo ezinzima, isifo sikashukela mellitus).
Ukwanda okubucayi kwezinga le-lactic acid emzimbeni isimo esidinga ukulashwa ngokushesha, esibhedlela. Kuze kube yi-50% yamacala akhonjwayo ayabulala!
Uma i-ph ingaphansi kuka-7.0, okuwukuphela kwendlela yokusindisa isiguli i-hemodialysis - ukuhlanzwa kwegazi.
Ukususa i-CO2 eyeqile, i-hyperventilation yamaphaphu iyadingeka.
Ezimweni ezinomusa, ngokufinyelela okufika ngesikhathi kochwepheshe, i-dropper ene-solution ye-alkaline (sodium bicarbonate, trisamine) kwanele. Izinga lokuphatha lincike ekucindezelweni okuphakathi kwe-venous. Lapho i-metabolism isithuthukisiwe, ungaqala ukwehlisa izinga le-lactate egazini. Kulokhu, kusetshenziswa izikimu ezahlukahlukene zokuphatha isisombululo se-glucose nge-insulin. Njengomthetho, lokhu kuyunithi 2-8. ngejubane le-ml / h.
Uma isiguli sinezinye izinto ezihambisana ne-lactic acidosis (ubuthi, i-anemia), ukwelashwa kwabo kwenziwa ngokwemigomo ye-classical.
I-prognosis yokutakula kusuka ku-lactic acidosis imbi. Ngisho nokwelashwa okwanele nokufinyelela okufika ngesikhathi kodokotela akuqinisekisi ukonga impilo. Ngakho-ke, abanesifo sikashukela, ikakhulukazi labo abathatha i-metformin, kufanele balalelisise imizimba yabo futhi bagcine amazinga abo kashukela ebangeni eliqondisiwe.
Ngemuva kokuqongelelwa kwenani elithile le-acid, i-lactic acidosis iguqulwa ibe yi-metabolic acidosis.
Kubaluleke kakhulu kubo bonke abantu abanesifo sikashukela ukwazi izimpawu eziphambili ze-lactic acidosis.
Ukwelashwa kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-2, kusetshenziswa izidakamizwa kubandakanya i-metformin biguanide. Uma isiguli sinezinkinga zokwehluleka kwezinso, lesi sidakamizwa singadala ukukhula kwe-lactic acidosis. Imiphumela emibi engalungile yesidakamizwa noma ukweqisa kwayo kungadala imiphumela emibi.
Ukunakekelwa okuphuthumayo esigulini kwenziwa ukuphathwa kangaphakathi kwezixazululo ze-sodium bicarbonate. Ukubuyisela i-pH yegazi, iziguli zithatha i-Trisamine. Uma ibhalansi ye-acid-base ingaphansi kwe-7, kwenziwa i-hemodialysis.
Ngesikhathi sokwelashwa, izinkomba zokucindezela kwegazi, izinga le-pH, amazinga e-potassium ne-calcium egazini zihlala zigadiwe, kwenziwa i-electrocardiogram.
Ukulawulwa okubandakanya i-plasma yegazi noma i-reopoliglyukin, kwenziwa i-dropper ene-carboxylase. Ama-anticoagulants anqunyelwe ukuthi anciphise ukuqina kwegazi. Amazinga we-glucose ajwayelekile ngokujoveka nge-insulin.
Ukwelashwa kukhethwa ngokulingeneyo esigulini ngasinye, kucatshangelwa ubunzima besimo kanye nezimpawu zomuntu ngamunye. Ukwelashwa kwenziwa esibhedlela ngaphansi kokuqashwa okuqinile kwabasebenzi bezokwelapha.
inake imiphumela emibi ye-greatuanides, thatha izidakamizwa ngokuncoma udokotela,
ukwelashwa okufika ngesikhathi kwegciwane, ukubanda ngaphansi kokuqondisa kukadokotela,
ukubonwa kwe-dispensary ku-endocrinologist.
Iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-I kanye ne-II kumele ziqaphele njalo amazinga kashukela egazini, zenze ukwelashwa kokuvimbela, vakashela udokotela.Kubalulekile ukulandela izincomo zikadokotela, unamathela ekudleni okuphansi kwe-carb, futhi uphile impilo enempilo.
I-lactic acidosis kushukela sinomphumela wenkambo yesifo engalawulwa. Ngenxa yalokhu, i-metabolism iyaphazamiseka, ama-organic acid akhiqizwa ngamanani amakhulu futhi aqongelela izicubu nezitho zomzimba.
Igama lalesi sifo lichazwa kanjena: i-lactate yi-α-hydroxypropionic (2-hydroxypropanoic) acid, acidosis inqubo yoku-oxidation. Kwabanesifo sikashukela nomuntu ophile kahle, lokhu kudalwa kwengqondo nakho kungaba yingozi enkulu, ngoba yikho okuba imbangela yokwakhiwa kwe-hyperlactacidemic coma. Kungani futhi kwenzeka kanjani lokhu?
Izimpawu ze-pulmonary hyperventilation,
ukuphazamiseka kwesigqi senhliziyo,
Ubuhlungu esiswini nangemuva kwe-sternum.
Lezi zimpawu ziyefana nokwanda okukhulu koshukela wegazi. Isimo se-ketoacidosis naso siwela ngaphansi kwezimpawu ezinjalo.
Umehluko omkhulu phakathi kwabo ubukhona bezinhlungu emisipha, njengasemuva kokuqeqeshwa ngokomzimba. Nge-ketoacidosis, abukho ubuhlungu.
Uma isiguli esinesifo sikashukela sikhononda ngobuhlungu bemisipha, kufanelekile ukukala amazinga kashukela egazini futhi siqaphele isimo somuntu. Ukuwohloka okubukhali enhlalakahleni, ukuba khona kwalezi zimpawu kukhombisa i-lactic acidosis. Udinga ukushayela i-ambulensi. Akunakwenzeka ukuthi unikeze usizo lokuqala.
Esibalweni esiphelele sezinto ezibangela i-lactic acidosis nezimpawu zohlobo oluhambisanayo, indawo ekhethekile inikezwe ukuthatha ama-biguanides. Kulokhu, izimpawu ze-lactic acidosis zenzeka ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus, zithatha izidakamizwa zohlobo lwe-antipyretic ngokuba khona kwale nto ekwakhiweni.
Ukuthuthukiswa kwe-lactic acidosis kwenzeka nge-hypoxia eyenzeka emithanjeni yamathambo, okuthi, ngokwesibonelo, ingahle ihlotshaniswe nengcindezi yomzimba yesikhathi eside. Imbangela ye-lactic acidosis ngaphandle kokuba khona okusobala kwe-hypoxia kungaba yi-leukemia, kanye nezinye izinhlobo zezinqubo zesimila.
Ngemuva kwalokho i-lactic acidosis ibonakala ngezimpawu ngendlela yokuwa: okokuqala nge-oligoanuria, bese kuba ne-anuria, ngokumelene nesizinda lapho ukuthuthukiswa kwe-intravascular coagulation (noma i-DIC) kwenzeka khona.
Imvamisa, izimpawu ze-lactic acidosis zibonakala ngokuvela kwe-intravascular thrombosis nge-hemorrhagic necrosis ethinta izinzwani nezandla. Kumele kuqashelwe ukuthi ukuthuthukiswa okusheshayo kwe-lactic acidosis, okwenzeka emahoreni ambalwa, akunagalelo ekubonakalweni kwezimpawu zokuphazamiseka kwesifo sikashukela.
Lezi zimpawu ikakhulukazi zifaka ukoma kolwelwesi lwe-mucous lolimi nolwelwesi, kanye nesikhumba esomile sonke. Kuyaphawuleka ukuthi kuleli cala, aze afike ku-30% weziguli ezine-hyperosmolar kanye nesifo sikashukela ezinezici ezihambelana nokutholakala kwe-lactate acidosis.
1 ligudluza lactate. Kuyingozi kakhulu le nkinga yokulimala kweziguli ezithatha ama-biguanides (indawo evimbela ukusetshenziswa kwe-lactate ngesibindi nemisipha ikhula), okuholela ekutheni ube ne-lactic acidosis kanye ne-metabolic acidosis enzima.
Kuthengiwe (Uhlobo A). Imvamisa debuts ngemuva kweminyaka engama-35. Kubangelwa ukwephulwa kokuhlinzekwa kwe-oksijini negazi kwezicubu. Izimpawu zesimo somtholampilo se-metabolic acidosis ziyabonakala - Imisebenzi ye-CNS ayvinjelwe, izinga lokuphefumula kanye nenhliziyo ishintsha. Ubudlelwano obuqondile phakathi kwezinga le-lactacidemia nezimpawu ze-neurological buqashwe. Ngesifo sikashukela, kunamathuba aphezulu okuthuthukisa ukushaqeka, ukwehla okukhulu komfutho wegazi.
I-Congenital (uhlobo B). Kubonakala kusukela ekuzalweni, okuvame kakhulu kusukela ebuntwaneni, kubhekiswa ezinhlotsheni zofuzo zokuphazamiseka kwe-metabolic. Kusukela ezinsukwini zokuqala zokuphila, ukuphazamiseka kwemizwa nokuphefumula kunqunywa: i-myotic hypotonus, areflexia, stupefaction, dyspnea, polypnoea, izimpawu zesifo somoya.
I-Lactic acidosis iyingozi enkulu ngenxa yengozi ephezulu ye-edema yamakhemikhali nokufa. Amathuba okufa ayanda ngokungabikho kokunakekelwa kwezokwelapha emahoreni ezayo ngemuva kwezimpawu zokuqala.
I-Vascular hypotension kanye ne-hypoxia yobuchopho kuholela ekwakhiweni kwezifo ezihlukene zokuzala, ukuntuleka kwemizwa. Ngemuva kwesikhathi esibuhlungu, iziguli zikhononda isikhathi eside sesiyezi, ikhanda elingelapheki. Kungahle kube nokukhubazeka kwenkulumo nememori, edinga izindlela zokuvuselela.
Izimpawu ezibalulekile ze-Lactic Acidosis
Lesi sifo senzeka ngokushesha okukhulu, ngaphandle kwezimpawu eziyisixwayiso.I-acute lactic acidosis iba namahora angama-2-3 futhi ngokushesha kuholela ekuwohlokeni kwesimo esijwayelekile, ukulahlekelwa ukwazi.
Izimpawu zokwanda kwe-lactic acidosis kuhlobo 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela:
Ukuphefumula kukaKussmaul (ukuphefumula kaningi),
kunciphile ukuphuma komchamo,
ukuntuleka kwe-Vitamin B,
isikhumba esomile, isikhumba esomile,
ukukhathala ngemuva kokuzivocavoca okuncane komzimba.
Lapho kudlula ukuhlolwa kwemitholampilo ku-serum yegazi, kutholakala ukwanda kwezinga le-lactic acid, bese ibhalansi ye-acid incishisiwe. Iphunga elibonakala nge-acetone ngesikhathi sokuphefumula lingenzeki.
Yiziphi izimpawu ze-lactic acidosis, kubonakaliswa kanjani lesi simo, futhi yiziphi izimpawu zaso eziphambili? Njengoba isiguli sikhula, isicanucanu, ukugabha, nobuhlungu esiswini kwenzeka. Ukuqina kwegazi le-arterial, izingqimba zegazi zingakheka, i-hemorrhagic necrosis kuma-phalanges emaphethelweni aphezulu naphansi.
Ama-Reflexes aphukile, kuvela izivumelwano zemisipha engaphenduki. Ukwehluleka kwenhliziyo kukhula ngokubhekene nesizinda sokuphefumula kwendlala yama-tishu, ubungozi bokushaywa unhlangothi, ukufakwa kwe-myocardial, amathumbu, amaphaphu kuyanda.
I-Lactic acidosis icasulisa ukungasebenzi okunjalo kwezitho zangaphakathi nezinhlelo eziholela esigulini ekufeni uma ukunakekelwa kwezokwelashwa kungazange kunikezwe ngesikhathi.
Imvamisa ikhula ngokuqinile (kungakapheli amahora ambalwa), abaqalayo bavame ukungabikho noma bangabi nalutho. Iziguli zingahlangabezana nobuhlungu bemisipha, izinhlungu esifubeni, izimpawu zokuqina, ukuphefumula ngokushesha, ukunganakwa, ukozela, noma ukuqwasha.
Kodwa-ke, izimpawu ezikhona zesithombe somtholampilo se-lactic acidosis ziyizibonakaliso zokuhluleka kweenhliziyo, okwandiswa yi-acidosis enzima, okuvela kuzo ushintsho ekuvumeni kwe-myocardial contractility.
Ku-Dynamics, isimo seziguli siya ngokuya sikhula: njengoba i-acidosis yanda, ubuhlungu besisu nokuhlanza kungavela. Izimpawu ezahlukahlukene ze-neurological zembulwa kusuka ku-areflexia kuya kuma-spastic paresis nama-hyperkinesis.
Ngaphambi kokuba ikoma likhule (ukulahleka kwengqondo), ngaphandle kokungabikhona kwephunga le-acetone emoyeni ophelile (akukho ketonemia), ukuphefumula okungenangqondo kukaKussmaul kuyabonakala, kuvame ukuhambisana nokuqina kwe-metabolic acidosis.
Ukuwa nge-oligo- bese kuba ne-anuria, i-hypothermia iyakhula. Ngokuphikisana nalesi sizinda, i-DIC iba ne-(intravascular coagulation syndrome), i-intravascular thrombosis ene-hemorrhagic necrosis yeminwe nezinzwani ivamile.
Ukuthuthuka okusheshayo kwe-lactic acidosis (amahora amaningi) akunikeleli ekubonakalweni kwezimpawu zokubonakala kwesifo sikashukela (isikhumba esomile, ulwelwesi lwama-mucous nolimi). I-10-30% yeziguli ezinesifo sikashukela ne-hyperosmolar zinezici ze-lactic acidosis.
Ukuvimbela kwe-lactic acidosis
Ukuvimbela, okusiza ukuvimbela ukuqala kwe-lactacidemic coma ngokumelene nesizinda se-lactic acidosis, izimpawu esizihlole ngenhla, ziqukethe, ngokulandelana, ekuvimbeleni i-hypoxia, kanye nasengqondweni yokulawula ukunxeshezelwa kwesifo sikashukela.
Futhi, i-lactic acidosis, izimpawu zayo ezingenzeka ngokusetshenziswa kwe-biguanides, idinga ukuqina ekunqumeni komuntu ngamunye komthamo wabo ngokukhanselwa okusheshayo uma kwenzeka izifo zohlobo lwangaphakathi (umkhuhlane noma i-pneumonia, njll).
Ukuze uvikele i-lactacidemic coma ngenxa ye-lactic acidosis, kuyadingeka ukuvimbela i-hypoxia futhi kulawule ukulawulwa kwesifo sikashukela.
I-Lactic acidosis, izimpawu zayo ingavela lapho kusetshenziswa i-biguanides, kudinga ukuzimisela kwemithamo yazo ngokuhoxa ngokushesha uma kwenzeka izifo ezithathanayo, ngokwesibonelo, inyumoniya.
I-Lactic acidosis inezimpawu ngokubonakala kwezinqubo zokuphindaphindeka, ngakho-ke, abanesifo sikashukela ngokusetshenziswa kwama-biguanides badinga ukukucabanga lokhu lapho benza ukwelashwa.
Uma kukhona izinsolo ezibonisa ukusikisela kwe-lactic acidosis, kufanele uthintane nodokotela we-endocrinologist ngokushesha.
Ngithatha i-metformin, kepha ngivame ukuba noshukela wegazi ophakeme cishe u-8-9 mgmol, angazi ukuthi yini okufanele yenziwe udokotela, umhlengikazi usilandela nje esikhungweni, futhi kubukeka sengathi akaqondi ukuthi sinjani isifo sikashukela .Novouralsk, eSverdlovsk Region
ushukela ukhuphuka ikakhulukazi ngemuva kwezimo ezicindezelayo kanye nokwephulwa kokudla
ku-67 ngiphila impilo esebenzayo, ukubhukuda nokuzivocavoca ngithatha i-metformin kabili ngemuva kokudla, ngilinde izincomo zemiyalezo engaphazamisi
Ngiphakamisile ushukela; ngiqale ukuphuza amaphilisi e-metformin; ingcindezi yehla yaya ku-100 kubhekwe kabi ukuthi mina, udokotela we-hypertonic onolwazi lodokotela ojwayelekile, ungibizele esibhedlela nengcindezi; nginovalo lokuthi ngabe kukhona icala ebenginengcindezi enjalo Ngiphuze ngokwejwayelekile ekucindezelweni engikulawulayo futhi manje sengicishe ngaphelelwa wumqondo wokuthi ngenzeni kubukeka sengathi ushukela akusebenzi kimi amaphilisi mhlawumbe kufanele kumiswe ukuwaphuza ushukela ongcono kunokulala phansi ungazi
Ezimweni eziningi, ukuvela kwe-lactic acid ngokweqile kuvela ezigulini ezingazi ngesifo sikashukela, ngakho-ke kwaqhubeka ngokungalawuleki futhi ngaphandle kokwelashwa okufanele. Esikhathini esizayo, ukuze ugweme ukubuyela emuva kwe-lactic acidosis, kuyadingeka ukulandela ngokuqinile konke ukunconywa kukadokotela, ukuqapha amandla okuthuthuka kwe-anomaly, ukuhlolwa njalo nokuhlolwa.
Ngokuvamile, isiguli esinesifo sikashukela kufanele ngaso sonke isikhathi silalelisise umzimba wakhe futhi, ngezimpawu zokuqala ezethusayo, shayela i-ambulensi noma uthintane nodokotela.
Uma ucabanga ukuthi une-lactic acidosis nezimpawu ezisetshenziswayo ngalesi sifo, khona-ke i-endocrinologist ingakusiza.
Siphinde sinikele ukusebenzisa insizakalo yethu yokuxilongwa kwezifo eziku-inthanethi, ekhetha izifo ezinokwenzeka ngokuya ngezimpawu ezifakiwe.
Isifo sokukhathala okungamahlalakhona (abbr. CFS) yisimo lapho ubuthakathaka bengqondo nangokomzimba buvela khona ngenxa yezizathu ezingaziwa futhi kuthatha izinyanga eziyisithupha noma ngaphezulu.
Isifo sokukhathala okungamahlalakhona, izimpawu zazo okufanele zihambisane nezinga elithile nezifo ezithathelwanayo, zihlobene kakhulu nokushesha kwesantya sempilo yabantu kanye nokwanda kokugeleza kwemininingwane okumfisela umuntu ngokoqobo ukubonwa okulandelayo.
Akuyona imfihlo ukuthi emzimbeni wawo wonke umuntu ngesikhathi senqubo ehlukahlukene, kufaka phakathi ukugaya ukudla, ama-microorganisms ayabandakanyeka. I-dysbacteriosis yisifo lapho isilinganiso kanye nokwakheka kwama-microorganisms okuhlala amathumbu kuphulwa khona. Lokhu kungaholela ekuphazamisweni okukhulu kwesisu namathumbu.
I-Alport syndrome noma i-nephritis eyindlalifa yisifo sezinso esitholwa njengefa. Ngamanye amagama, lesi sifo sisebenza kuphela kulabo abaphethe izakhi zofuzo. Abesilisa bathambekele kakhulu ekuguleni, kepha nabesifazane banokugula.
Izimpawu zokuqala ziyavela ezinganeni kusuka eminyakeni emi-3 kuye kwengama-8. Lesi sifo uqobo singaba i-asymptomatic. Ngokuvamile kutholakala ngesikhathi sokuhlolwa okujwayelekile noma lapho kutholakala khona esinye isifo esingemuva.
I-meningitis e-Tuberculous ukuvuvukala kolwelwesi oluthambile lobuchopho. Ezimweni eziningi, lesi sifo siyinkinga yolunye uhlobo lwesifo sofuba.Hhayi umehluko isigaba sabantu asebevele benale nqubo yokuvuvukala nganoma yiluphi uhlobo.
Ngokuzivocavoca nangokuzithiba, abantu abaningi bangenza ngaphandle komuthi.
Izimpawu nokwelashwa kwezifo zabantu
Ukuphrinta kabusha izinto zokwakha kungenzeka kuphela ngemvume yezokuphatha kanye nesixhumanisi esisebenzayo kumthombo.
Yonke imininingwane enikeziwe ingaphansi kokubonisana okuphoqelelwe ngudokotela wakho!
Imibuzo nokusikisela: Ikheli le-imeyili elivikelwe le-Java
Okubi, noma ngabe ukwelashwa okufika ngesikhathi futhi okwanele, ukufa kwabantu kudlula i-50%.
Umphumela we-lactic acidosis uthande ukwelashwa okuphumelelayo kwesifo esingezansi, ukuhambisana nesikhathi nokwanela kokwelashwa kokungena. I-prognosis futhi incike ohlotsheni lwe-lactacidemia - ukusinda kuphezulu phakathi kwabantu abanhlobo lwe-A pathology (etholwayo).
Ukuvimbela kuncishiselwa ekuvinjelweni kwe-hypoxia, ukudakwa, ukwelashwa okulungile kwesifo sikashukela ngokunamathela ngokuqinile kumthamo ngamunye we-Biguanides nokukhanselwa kwawo ngokushesha uma kwenzeka kungenwa izifo ezithinta ngaphakathi (i-pneumonia, umkhuhlane).
Iziguli ezivela emaqenjini anobungozi obukhulu - ngokuxilongwa kwesifo sikashukela kuhlangene nokukhulelwa, ukuguga - kufanele siqaphe ngokucophelela isimo sabo, ngezibonakaliso zokuqala zobuhlungu bemisipha nobuthakathaka, funa izeluleko zezokwelashwa.
Ngabe lactate ivelaphi? Umuthi ungaqongelela njalo emzimbeni: ezicutshini zemisipha, isikhumba nobuchopho. Ikakhulu ngokweqile kwayo kubonakala ngemuva kokuzivocavoca okungokomzimba okungajwayelekile (ukuqina kwemisipha, ubuhlungu nokungaphatheki kahle).
Uma inqubo ye-metabolic yehluleka futhi i-lactic acid ingena egazini ngobuningi, i-lactic acidosis iya kancane kancane.
Lokhu kwenzeka hhayi kuphela kwiziguli ezinesifo sikashukela.
Imibandela elandelayo ingaba nomthelela kwinqubo engemihle:
Izifo ezahlukahlukene ezithathelanayo kanye nokuvuvukala emzimbeni.
Uphuzo oludakayo olungalapheki.
Ukulimala kakhulu emzimbeni.
I-Myocardial infarction kwifomu elibi.
Ku-diabetes, lokhu kwe-anomaly kungabangelwa ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezinciphisa ushukela. Umphumela ofanayo ofanayo utholakala ezibhebheni zohlobo lwe-Biguanide, okuyiMetformin, iBagomet, iSiofor, iGlyukofazh, Avandamet.
I-Hypoxia (indlala ye-oksijini) yemisipha yamathambo ingaba imbangela yalesi simo ngenxa yokuzivocavoca umzimba isikhathi eside. Ukuthuthukiswa kwe-lactic acidosis kuthinteka ekwakheni isimila, umdlavuza wegazi nengculazi.
Izindlela zokwelapha ze-lactic acidosis
Ukwelashwa kwe-lactic acidosis ku-mellitus yesifo sikashukela kwenziwa ngokunakekelwa okujulile futhi kufaka nezinyathelo ezinjalo:
ukuphathwa kangaphakathi kwe-sodium bicarbonate,
ukwethulwa kwe-methylene eluhlaza okwesibhakabhaka ukwehlisa ukoma,
ukusetshenziswa kwe-trisamine yezidakamizwa - kuqeda i-hyperlactatacidemia,
hemodialysis nokwehla kwegazi pH lactate acidosis, lactic acidosis, incazelo, isizathu, enjalo